Ndị ndezi na-edekọ mgbanwe na akụkọ site na ịlele ọdịiche dị n'etiti ngbanwe abụọ nke ibe - nke a maara dị ka "diffs"; egosiri mgbanwe n'etiti nsụgharị abụọ na uhie.Mèzi
Ndị odee nwere ike dezie na-amaghị aha; N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, a na-edekọ adreesị IP ha dị ka aha onye edemede. A na-edobe ndezigharị gara aga na akụkọ Wikipedia, ma bụrụkwa nke a na-ahụ ya site na ibe "edit akụkọ ihe mere eme" nke edobere n'usoro oge, na-eme ka enwere ike ịhụ ụdị mbụ nke ibe ọ bụla n'oge ọ bụla.Mèzi
A na-eme mgbanwe na Wikipedia ozugbo na Weebụ, na-enweghị nyocha nke ndị ọgbọ. Nkà ihe ọmụma Wikipedia bụ na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị nwere ezi nzube, ndị na-edezi ihe ọmụma ga-eji nwayọọ nwayọọ na-emezi akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'obosara, omimi na izi ezi, na, na-enye oge zuru ezu, eziokwu ga-emeri na ọbụnadị aghụghọ ga-ejide ma mezie ya. Ya mere, Wikipedia na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ka ọ dezie, ma e wezụga maka ndị ọrụ amachibidoro maka mmebi iwu na-adịgide adịgide ka usoro ikpe ikpe ogologo gasịrị. N'otu aka ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla nwere ike dezie; A na-enwekwa nkwarụ mgbe ụfọdụ nwa oge maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke akụkọ n'ihi mbibi na-adịgide adịgide ma ọ bụ esemokwu edozibeghị n'etiti ndị nkwado. Wikipedia ekwuputabeghị nke ọ bụla n'ime akụkọ ya "zuru oke" ma ọ bụ "mechara".Mèzi
Dị ka akwụkwọ nkà ihe ọmụma izugbe, Wikipedia na-achọ ịkọwa ọtụtụ isiokwu dị ka o kwere mee. Ọ na-ekpuchi isiokwu ndị a na-ahụkarị na akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọdịnala, yana ọtụtụ isiokwu ọdịnala na nka na-adịghị adị n'ọrụ ndị dị otú ahụ ma ọ bụ kpọchie ya na ntụnyere isiokwu pụrụ iche. Na mgbakwunye na uto na-enweghị atụ n'ọnụọgụ isiokwu, nkezi ogologo nke isiokwu ọ bụla amụbaala nke ọma, dị ka ọnụ ọgụgụ nke "akụkọ pụtara" ghọtara maka ịdị elu ha dị elu. Otú ọ dị, nnukwu oghere dị na mkpuchi ọrụ a ka dị, na ọtụtụ akụkọ anaghị akọwapụta ya nke ọma n'ụzọ kwekọrọ na amụma nchịkọta akụkọ Wikipedia.Mèzi
Otu ike ama ama nke Wikipedia bụ oge ya. Dị ka ọ na-adị, a na-ebipụta akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọhụrụ kwa afọ ole na ole, n'ihi na ihe ọmụma ha bịara doo anya na ọ bụ ihe na-adịghịzizi emezi. Echiche nke idegharị na-aga n'ihu, bụ nke a na-edegharị akwụkwọ nkà ihe ọmụma dum ma na-ebipụta kwa afọ ole na ole, dochie nke a ma ugbu a ọtụtụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma na-arụ ọrụ. Wikipedia na-ewegharịgharị na-aga n'ihu ruo oke ya - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ niile nwere ike ịmegharị ya n'oge ọ bụla, na-ekwe ka ọrụ ahụ tinye ihe omume dị ugbu a. Dị ka ihe atụ, ndị nta akụkọ na-edekarị akụkọ banyere ala ọma jijiji ahụ mere n’Oké Osimiri India n’afọ 2004 ná mbipụta Bekee n’ụbọchị ndị sochiri ihe omume ahụ.Mèzi
Atumatu na ntuziakaMèzi
A na-eme mkpebi na ọdịnaya na usoro nhazi nke Wikipedia site na ime mkpebi nkwenye na, mgbe ụfọdụ, site na ịtụ vootu; Jimmy Wales na Wikimedia Foundation jigidere ikpe ikpeazụ. Wikipedia nwere ọtụtụ atumatu na ntụzịaka, mepụtakwara site na nkwenye, na-eduzi ọrụ na ọrụ a, na-ekpuchi omume, ọdịnaya metụtara na okwu gbasara iwu. Otu n'ime ihe kachasị mkpa na-ekwu na a ga-ederịrị isiokwu site na "echiche na-anọpụ iche", na-egosipụta echiche niile dị ịrịba ama na ihe iseokwu tinyere ihe akaebe na-akwado ha - ya mere, kama ịchọ ịchọpụta ihe bụ eziokwu nke isiokwu ha, isiokwu na-anwa anwa. ịkọwa ha n'eleghị mmadụ anya n'ihu site n'echiche niile dị mkpa. Ederede onye ọ bụla nwere nkwupụta nkwutọ, mmebi iwu nwebiisinka, na ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ibute ụgwọ iwu ma ọ bụ na-emebi Wikipedia na-ezobe kpamkpam site na iji usoro akpọrọ "Nlebaanya".Mèzi
Ọdịnaya efu na ikikeMèzi
Ihe nkwado na Wikipedia bụ GNU Free Documentation License (GFDL), otu n'ime ọtụtụ ikikere nwebiisinka nke na-enye ohere ikesagharị, imepụta ọrụ ewepụtara na iji ọdịnaya azụmaahịa. Ikikere a na-enye ndị ndezi Wikipedia aka idowe ikike nwebiisinka nke ọrụ ha, mana na-enye ohere ka ndị ọzọ wulite n'ọrụ ahụ wee bipụta ya, ọ bụrụhaala na akwadoro onye edemede mbụ yana GFDL kpuchirikwa ọrụ ewepụtara ya. Ikikere a na-ahụ na enwere ike dezie Wikipedia n'efu; A na-edekọ onyinye onye odee ọ bụla maka ụmụ ọmụmụ na nchekwa data. Larry Sanger ekwuola na inwe GFDL dị ka "nkwenye nke nnwere onwe bụ ihe mkpali siri ike ịrụ ọrụ na akwụkwọ nkà ihe ọmụma efu".Mèzi
Wikipedia nwekwara ihe onyonyo na mgbasa ozi ndị ọzọ nke ndị ndezi ya ekepụtaghị, mana ọ dị na mpaghara ọha. A na-ewepụta ọdịnaya ndị ọzọ dị na Wikipedia n'okpuru usoro nwebisiinka dị iche iche ma ọ bụ ikikere dakọtara na GFDL, dị ka ikikere Creative Commons. E gosipụtara ihe ndị ọzọ dị ka akara ụlọ ọrụ, ihe nlele egwu, ma ọ bụ foto akụkọ nwebiisinka nwere nkwuputa eji eme ihe ziri ezi n'okpuru iwu nwebiisinka United States. Wikimedia Commons, ebe nchekwa mgbasa ozi na ọrụ nwanne nwanyị nke a na-echekwa ọtụtụ onyonyo Wikipedia, na-enyekwa ikike nwebiisinka ndị ọzọ, mana anaghị anabata onyonyo eji eme ihe ziri ezi. Ndị ntinye aka nwere ike ịhọrọ inye onyinye ha ọtụtụ ikike n'okpuru ma GFDL na ngalaba ọha, ma ọ bụ GFDL na ikikere ndị ọzọ, na-enye ndị ọzọ ohere iji ọdịnaya n'okpuru nke ọ bụla n'ime ikike ndị a.Mèzi
Ikikere mepere emepe Wikipedia na-akwalite ojiji ọhụrụ na ngosipụta nke ọdịnaya ya. Ụdị a na-ekwu okwu dị maka ụfọdụ akụkọ n'ụdị Ogg Vorbis, ebe ọ bụ na usoro MP3 a na-ejikarị eme ihe na-ekpuchi ya site na ikikere ngwanrọ nke na-eme ka nkesa n'okpuru ikike efu. Ụdị Wikipedia guzoro ọtọ dị ka Lexipedia dị maka ngwaọrụ ejiri aka. Ụmụaka SOS na-ekesa akwụkwọ nkà ihe ọmụma na CD (Nhọrọ CD Wikipedia 2006). Mpempe akwụkwọ edebatara nke Wikipedia ahọpụtara dịkwa site na PediaPress, mbipụta na-achọ ọrụ. Ọrụ dị n'ime Wikipedia na-arụ ọrụ na "Wikipedia 1.0", nchịkọta akụkọ Wikipedia enyochagoro maka izi ezi ma dị njikere maka ibipụta ma ọ bụ ọkụ na CD. E kesara Wikipedia Wikipedia German na DVD; A na-ahazi ụdị mbipụta na dijitalụ nke mbipụta Bekee.Mèzi
Ode akwụkwọ na njikwaMèzi
Akụrụngwa na ngwaikeMèzi
Ntụkwasị obi na ele mmadụ anya n'ihuMèzi
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipidia&oldid=82324
Last edited on 30 Ọnwa isii 2022, at 19:53
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 30 Ọnwa isii 2022, mgbe 19:53